रूसमा क्रिसमस डिनर | Absolut यात्रा
रूसमा क्रिसमस डिनर
विश्वका २.2.400 अरब मसीहीहरू छन् जसले प्रत्येक देशको परम्परा र क्रिसमस सम्प्रदायको अनुसार फरक किसिमले क्रिसमस मनाउँछन्। यस अवसरमा हामी सम्बोधन गर्नेछौं कि यो छुट्टी रूसमा कसरी मनाईन्छ र यस राष्ट्रमा क्रिसमसको साँझको भोज के हो।
यस देशले यस मनपर्दो मितिको बारेमा चलनहरू हामी सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दा धेरै फरक छ। के तपाई रूसमा क्रिसमसको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ? पढिरहनुहोस्!
1 रूसमा क्रिसमस कहिले मनाइन्छ?
2 रूस मा क्रिसमस ईभ कस्तो छ?
3 एडभेन्ट फास्ट
4 रूसमा क्रिसमस डिनर
5 रूसमा कस्तो क्रिसमस क्यारोलहरू गाइन्छन्?
6 र रूसीहरूले कसरी सान्ता नेल मनाउँछन्?
7 रसिया मा नयाँ वर्ष
8 क्रिसमसमा रूसीहरू कसरी रमाइलो गर्छन्?
रूसमा क्रिसमस कहिले मनाइन्छ?
विश्वको सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट ईसाई सम्प्रदायहरूले डिसेम्बर २ 25 लाई ख्रिष्टको जन्म मनाउँछन्। तथापि, अर्थोडक्स चर्चले गर्दैन। माथिका समूहहरूसँग धेरैजसो विश्वास, सिद्धान्त र रीतिथिति बाँडफाँड गरे तापनि धेरैजसो अर्थोडक्स कुलपतिहरूले जनवरी January मा क्रिसमस मनाउँछन्। तर के मनसाय हो?
वास्तवमा, रुसीहरू सहित अर्थोडक्सहरूले पनि डिसेम्बर 25 मा क्रिसमस मनाउँछन्। केवल तिनीहरूले जुलियन क्यालेन्डर अनुसरण गर्दछ, जुन ग्रेगोरियन पात्रोमा जनवरी January छ।
रूस मा क्रिसमस ईभ कस्तो छ?
क्याथोलिकहरूले डिसेम्बर २ 24 मा क्रिसमसको पूर्वसन्ध मनाउने तरिकामा, रूसीहरूले जनवरी on मा गर्दछन्। राति १० बजे, मस्कोको क्रिस्टल अफ क्राइष्ट दि उद्धारकबाट राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण देशका लागि परम्परागत समारोह आयोजना गर्छन्।
सबैलाई थाहा छ कि एड्भेन्ट क्रिसमस भन्दा पहिले हुने गर्दछ, जुन ख्रीष्टको जन्मको तयारीको समय हो। रूसमा जहाँ अर्थोडक्स विश्वास प्रबल छ, एड्भेन्ट नोभेम्बर २ 28 देखि जनवरी from सम्म हुन्छ। यस चरणमा, एक द्रुत बनाइन्छ जुन एड्भेन्टको अन्तिम दिनमा दिनभरि छिटोबाट अन्त्य हुन्छ। यो केवल भाँचिन र फेरि खान सकिन्छ जब विश्वासीहरूले पहिलो तारा देख्छन्।
खाना को कुरा, के तपाईंलाई थाहा छ रसियामा क्रिसमसको खानामा खाइएका विशिष्ट भाँडाहरू के हुन्? परिवारहरू प्राय: फरक विधिहरू तयार गर्दछन्। यी केहि सब भन्दा सामान्य हो:
कुटिया: पार्टी को एक मुख्य पकवान। ओर्थोडोक्स धर्ममा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको प्रतीकात्मक अर्थ हुन्छ। यसैले गहुँले ख्रीष्टको पुनरुत्थान हुन्छ र महले अनन्तताका लागि संकेत गर्दछ। नतीजा एक अनुष्ठानको खाना हो जसमा तपाइँ नट, किसमिस र खसफनी बीजहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ।
भुनी हंस: एड्भेन्टको बखत यसलाई मासु खाने अनुमति थिएन त्यसैले क्रिसमस आउँदा रूसीहरूले यस पदार्थको साथ भाँडो पकाउन भाँडा तयार पारे। भुनी गिज सबैभन्दा लोकप्रिय व्यंजनहरू मध्ये एक थियो।
सुँगुर: रूसमा क्रिसमसको खानामा खाइने अर्को थालमा सुँगुर खुवाइरहेको छ वा रूसीहरूले यसलाई "दूधिया सुँगुर" भनेका छन्। यो दलिया र तरकारीहरु संग भुनी सेवा गरीन्छ। यो चाँडो समाप्त गर्न एड्भेन्टको अन्त्यमा लिन यो विशिष्ट हो।
कुलिबियाक: यो भरिएका केक कुनै पनि पार्टीमा हिट हो र प्राय: रूसमा क्रिसमस डिनरमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ। यो माछा, चामल, मासु, तरकारी, मशरूम, अण्डाहरूका साथ विभिन्न प्रकारका विभिन्न आटाबाट बनाउन सकिन्छ। यो केकको एक टुक्रामा पूरा खाना जस्तै हो!
भिनाग्रेट: यो परम्परागत सलाद हो जुन आलु, गाजर, बीटहरू, भिनेगर र तेलमा अचारको साथ तयार पारिन्छ। आज पनि रूसमा क्रिसमस डिनरको लागि यो अझै पनि मनपर्ने भोजन हो किनभने यसलाई तयार पार्न सस्तो र सस्तो छ। यद्यपि परिवारहरू जो आफ्नो प्यालेटको अनुभवलाई अर्को तहमा लैजान चाहन्छन् स्टर्जन जस्ता उत्कृष्ट माछा थप गर्दछन्।
ओलिभियर सलाद: छुट्टिको लागि बनाउने यो अर्को धेरै साधारण सलाद हो। यसमा गाजर, प्याज, उमालेको अण्डा, आलु, अचार, सॉसेज र मटर छ। सबै चीज मेयोनेजको साथ मिश्रित।
कोजुली: यो क्रिसमसको समयमा रसियामा सबैभन्दा लोकप्रिय मिठाई हो। यी क्रिसमस कुकीहरू हुन् जसलाई सिरपको साथ क्रन्ची जिन्जरब्रेडले बनाउँदछन् र आइसिंग चिनीले सजाइएको छ। यी कुकीहरू प्रस्तुत गरिएको सबैभन्दा विशिष्ट रूपहरू हुन् स्वर्गदूतहरू, क्रिसमस ताराहरू, जनावरहरू र घरहरू। तिनीहरू पनि एक उत्सव सजावट को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
Vzvar: रूसमा क्रिसमसको खाना पछि यस पेयलाई मिठाईको रूपमा दिइन्छ। यो ओभनमा फल र जामुनले बनेको कम्पोटेटको साथ तयार गरिन्छ जुन जडिबुटी, मसला र धेरै महको साथ अनुभवी हुन्छ। यो तातो वाइन वा पंचको लागि राम्रो विकल्प हो।
तालिका भुसाले ढाकिएको छ, येशूको जन्म भएको स्थानको सम्झनामा, र सेतो टेबलक्लोथ माथि राखिएको छ।
रूसमा कस्तो क्रिसमस क्यारोलहरू गाइन्छन्?
रसियामा विशिष्ट क्रिसमस क्यारोलहरू स्लाभिक गीतले कोलियडकी भनेर चिनिन्छ। यस मेलोडी क्रिसमसको पूर्वसन्धामा सडकमा मानिसहरूका समूहले गाईन्छन् जो क्षेत्रीय पोशाकमा सजिएका हुन्छन्।
र रूसीहरूले कसरी सान्ता नेल मनाउँछन्?
रसियामा, यो फादर नेल होइन जो उनीहरूको घरको चिमनीमा लुकाएर बच्चाहरूलाई उपहार दिन्छन् तर डेड मोरोजसँग उनीकी नातिनी स्नेगुरोचका पनि थिए। यो चरित्रले नयाँ सालको दिनमा ससाना व्यक्तिलाई उपहार ल्याउँछ, जनवरी १२ मा रूसी पात्रोमा।
रसिया मा नयाँ वर्ष
क्रिष्टमस जनवरी on मा छ र क्रिसमस ईभ जनवरी7मा छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, रूसी पात्रो चलिरहेको छ र नयाँ वर्ष जनवरी १२-१-6 को रातमा मनाइन्छ। पार्टीलाई "पुरानो नयाँ वर्ष" भनेर चिनिन्छ। जिज्ञासु, सही?
सोवियत कालदेखि यो बर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय उत्सव भएको छ र यस तिथिमा नयाँ वर्षको फर रूख सामान्यतया सजाइन्छ, जुन रातो ताराको साथ मुकुट गरिएको छ। कम्युनिष्ट प्रतीक।
क्रिसमसमा रूसीहरू कसरी रमाइलो गर्छन्?
क्रिसमसमा रूसीहरू धेरै किसिमका रमाइलो गर्छन्। रुसीहरूको छुट्टिमा बिताउने सबैभन्दा लोकप्रिय परम्परामध्ये एक आइस स्केटि r रिinks्कको आनन्द लिन गइरहेको छ। तिनीहरू व्यावहारिक जताततै छन्!
बच्चाहरूको लागि, विन्क शोहरू आयोजना गरिन्छन् जसको मुख्य बिषय बच्चा येशूको जन्म हो र साना केटाकेटीहरूले मनपराउँदछन्।
पुराना व्यक्तिहरू क्रिसमसको उपहारहरू फेला पार्न शपिंगमा छनौट गर्दछन्। स्टोरहरू र किनमेल केन्द्रहरू सबै प्रकारको बत्तीहरू, मालाहरू, देवदार रूखहरू, स्नोमेन, इत्यादिका साथ सजाइएको छ। बच्चाहरूलाई प्राय: खेलौना दिइन्छ जस्तो विश्वका सबै भागहरूमा र वयस्कहरूलाई पुस्तक, संगीत, प्रविधि, आदि दिइन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » रूसमा क्रिसमस डिनर
भारतको बारेमा रूखहरू
मोरक्कोका केहि प्रसिद्ध कलाकारहरू
629243१४981२० ईसी १४ ई ४